Indlela yokukhusela iphasiwedi Khusela iNgcaciso yeNgcaciso ka-2007
Cofa kwi-Button ye-Microsoft Office
Iphasiwedi ekhusela i-database ye-Access igcina idatha evelele kwi-eyes. Eli nqaku likuhamba ngenkqubo yokubethela i-database kunye nokukhusela ngephasiwedi.
Uzakufuna ukuvula i-database usebenzisa inkqubo ekhethekileyo ukuqinisekisa ukuba akukho nabasebenzisi abasebenzayo okwangoku. Isinyathelo sokuqala kukucofa iqhosha leMicrosoft Office .
Le nto ifumaneka kuphela xa usebenzisa iMicrosoft Office Access 2007 kunye neenkcukacha zakho kwifomathi ye-ACCDB.
Qaphela: le miyalelo i-For Access 2007. Ukuba usebenzisa i-version yangaphambili yokuFinyelela, funda iphasiwedi Ukukhusela iNgcaciso ye-2010 okanye iphasiwedi Ukukhusela i-Access Database yakwa-2013.
Khetha Vula kwi-Imenyu ye-Office
Khetha Vula kwi menu ye-Office.
Vula i-Database kwi-Exclusive Mode
Ukuvula idatha kwimo ekhethekileyo. Mike Chapple
Vula idatha ofuna ukuyibhala kwaye uklikhawuleze kanye. Emva koko, kunokuba ucofe iqhosha elivulekileyo, nqakraza uphawu lwesicatshulwa esingezantsi ngakwesokudla kweqhosha. Khetha i- Open Exclusive ukuvula idatha kwimodi ekhethekileyo.
Ukukhetha Ukubethela. Mike Chapple
Ukusuka kwi- Tools Tools ithebhu, cofa kabini kwi- Encrypt nge-Password .
Setha iphasiwedi yedatha
Ukubeka iphasiwedi yedatha. Mike Chapple
Khetha iphasiwedi eqinile kwisiseko sakho sedatha uze uyifake kwiibhokisi zeNkcukacha zeNkcukacha zeNgcaciso kunye neNgciniso kwiBhokisi yeDiski yeDiskhi yeDiskhi yeDiski yeDatabase .
Emva kokuchofoza i- OK , i-database ibhalwe ngekhowudi. Le nkqubo ingathatha ixesha lixhomekeke kubukhulu besiseko sedatha. Ngexesha elizayo xa uvula i-database, uya kucelwa ukuba ungene kwiphasiwedi ngaphambi kokufikelela kuyo.
Ukudala Umbuzo Olula Ngo-2013
Uhlobo Lwakhe Luhlobo Luni?
Indlela yokufumana iNombolo yeVisa yokuFundiswa kwabaFundisi ukuba abe nguMhlali ohlala njalo
Ngaba iQuran ifuna abafazi ukuba bagqoke isigqubuthelo?
Indlela Yokuthi "Kukho" kunye "Kukhona" ngesiTaliyane
Ixesha le-Chalcolithic: Iziqalo zeMetallurgy yeCopper
Iingcali ezi-10 zokuqala ezichaze iiBlues